Semalt Expert Shares 10 Zvigadzirwa Zvekushandisa KweWebhu ZveZvigadziri
mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana, kubudisa dambudziko rinobatsira kune webmasters, nyanzvi, vatapi venhau, vateereri, vakukuri, uye mablogiki. Vanobatsira kutora data kubva pamapeji akawanda ewebhu uye zvinowanzoshandiswa nemabhizimusi uye makambani ekutsvakurudza misika. Izvo zvinoshandiswa kuparadzira deta kubva kumafoni efoni uye emaimeri kubva panzvimbo dzakasiyana. Kunyangwe iwe uri mukutenga uye uchida kutarisa matengo emarudzi akasiyana-siyana, unogona kushandisa mabhidhiro ekutsvaga webwebhu uye maitiro - logo makers free online.
1. Cloud Scrape kana Dexi.io
Cloud Scrape kana Dexi.io inotsigira kukohwa kwemashoko kubva pamapeji ewebhu uye hazvidi kubudiswa pafoni yako. Zvinoreva kuti chigoni ichi chinogona kuwanikwa uye chinoshandiswa paIndaneti uye ine shanduro yakadzika-based editor kuti zvinhu zviitike kwauri. Dhiyabhorosi yakabudiswa inogona kuchengetwa mu-CSV neJSON mafomu, uye paBhokisi.net neGoogle Drive.
Ndiyo gore-based scraper uye kudhonza dhesi yeshoko. Izvi zvinobvumira vashanduri uye webmasters kutora data inobatsira uye inodzidzisa mumasekondi. Scrapinghub yakashandiswa nevakasiyana-siyana vanobhururuka uye vatsvakurudzi kusvika ikozvino. Iine muongorori akafananidzira rotator, achipa rubatsiro pamabhodhi akaipa uye achichera nzvimbo yose mukati meawa.
Chikamu chakanaka cheVisualScraper ndechokuti iyi inotengeserana nedzimwe mafomu akaita sQL, XML, CSV, uye JSON. Icho chimwe chezvinotonhora zvikuru uye zvinonyanya kushandiswa kwezvinyorwa zvekutsvaga zvinyorwa paIndaneti uye inobatsira kubvisa uye kutora mashoko munguva chaiyo-nguva. Purogiramu yepurogiramu ichakutora $ 49 pamwedzi uye inokubvumira kuwana mapeji anopfuura 100k.
Inonyatsozivikanwa nokuda kwekuvaka kwayo muIndaneti uye inogadzira mahwendefa akasiyana-siyana evashandisi. Import.io inotumira dhamusi kubva pamapeji ewebhu akasiyana-siyana uye inotumira mairi CSV files. Inonyatsozivikanwa nehutano hwaro hwepamusoro uye inokwanisa kutora mamiriyoni emaji pazuva. Iwe unogona kuikanda uye kushandura import.io pasina mari. Iyo inowirirana neLinux neWindows uye inogadzirisa ma-akhawunti eIndaneti.
Ndiyo imwe yenzira dzakanakisisa dzekubudiswa kwemashoko. Ichi chinyorwa chinopa nyore nyore uye zvakananga kupinda kune yakagadzirirwa uye chaiyo-nguva data uye inokamba mapeji akasiyana-siyana ewebhu. Iyo inogona kuita kuti iwe unoshuva migumisiro mumitauro inopfuura 200 uye inochengetedza zvabuda mu XML, RSS uye JSON mafomu.
Inotibvumidza kutora webhusaiti yose, blogs, nzvimbo dzekugarisana nevamwe, ATOM kana RSS feeds. Iyo inoponesa deta mumutauro unooneka uye unogona kuoneka, nekuda kweropa rayo API yekugadzirisa mafomu akawanda e data nedzidzo yakamhanya spam . Inobatsira kubvisa spam uye kunodzivirira kushandiswa kwemutauro usingakodzeri, kuvandudza hutano hwe data yako uye kuvimbisa kuchengetedzwa kwayo.
Iyo inozivikanwa neFoodfox inowedzera nehuwandu hwezvinhu uye kudhonza kwemashoko. Izvozvi hazvirevi zvinyorwa chete asi zvinoshandiswa uye zvinokambaira zvinyorwa zvako zvakakodzera uye zvinooneka. Iwe unogona kuparadzira chero rupiro rwewebhu pewebhu pasina chero rudiro rwemashoko.
Ichozve chimwe chine simba uye chinoshamisa chekugadzira webhu uye kushandiswa kwekutsvaga deta. 80sgs is a flexible tool that configures to your requirements and fetches lots of data immediately. Iyi web scraper yakatsvaira ma 600 domains kusvika ikozvino uye inoshandiswa nehomasti sePayPal.
Kugadzirisa ndeyekubudiswa kweSvondo yakakurumbira uye inobatsira uye yakawanda yezvinyorwa zvinyorwa uye inoita kuti kuongorora kwako kwepaIndaneti kuve nyore. Inotumira data yakatsvaga kumashiripiti eGoogle uye yakakodzera vose vanotanga uye nyanzvi. Iwe unogona nyore nyore kukopa dheta kumabhodhi ayo ebhothodhe uye Scraper inogadzira zvishoma XPaths maererano nezvinodiwa.